Must-visit destinations of Sagaing you shouldn't miss
🚌 စစ်ကိုင်းတိုင်းမှာ လည်ပတ်စရာ
— By Oway December 14, 2018 Tours	Comments Off on 🚌 စစ်ကိုင်းတိုင်းမှာ လည်ပတ်စရာ
“စစ်ကိုင်း” လို့ကြားလိုက်ရင် ကမ္ဘာ့အမြင့်ဆုံးရုပ်တုတွေထဲက တစ်ခုဖြစ်တဲ့ လေးကျွန်းစင်္ကြာရပ်တော်မူဆင်းတုတော်ကြီးကို အရင်ပြေးမြင်မိမယ်ထင်တယ်နော်!
သာယာတဲ့သဘာဝရှုခင်းတွေ၊ ကြည်ညိုစရာဘုရားပုထိုးစေတီတွေနဲ့ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးကို သွားရောက်လည်ပတ်တဲ့အခါရောက်အောင်သွားသင့်တဲ့ နေရာတွေအကြောင်းကို Oway ခရီးသွားမိတ်ဆွေတွေအတွက် ဝေမျှပေးလိုက်ပါတယ်။
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးကို သွားတဲ့အခါ ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ ရောက်အောင်သွားရောက်ဖူးမြော်သင့်တဲ့နေရာကတော့ လေးကျွန်းစင်္ကြာရပ်တော်မူဆင်းတုတော်ကြီးပါပဲ။
မုံရွာမြို့ ဗောဓိတစ်ထောင်သာသနာ့နယ်မြေအတွင်းမှာတည်ရှိတဲ့ ဒီဆင်းတုတော်ကြီးဟာ ဉာဏ်တော်အမြင့် (၄၂၄) ပေရှိပြီး ကမ္ဘာ့အမြင့်ဆုံးရုပ်တုတွေထဲမှာ တစ်ခုအပါအ၀င်ဖြစ်ပါတယ်။
မုံရွာမြို့ကိုရောက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ ဘုရားပုထိုး ကျောင်းကန်များစွာဝန်းရံပြီး အရမ်းကို သပ္ပာယ်စရာကောင်းတဲ့ လေးကျွန်းစင်္ကြာရပ်တော်မူဆင်းတုတော်ကြီးကို သွားရောက်ဖူးမြော်ကြဖို့ အကြံပြုလိုက်ပါရစေ။
အခုနှစ်တွေအတွင်း ပြည်တွင်းပြည်ပခရီးသွားတွေကြားမှာ နာမည်ကျော်ကြားရေပန်းစားလာခဲ့တဲ့ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးရဲ့အထင်ကရနေရာတစ်ခုကတော့ ဇလုံတောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ရွှေရောင်တောက်နေတဲ့ ဇလုံတောင်ကို ရိုက်ကူးထားတဲ့ဗီဒီယိုဟာ Social Media တွေမှာ ပျံ့နှံ့ခဲ့ပြီးနောက်မှာတော့ စိတ်ဝင်တစားလာရောက်ဖူးမြော်သူတွေ ပိုမိုများပြားလာခဲ့ပါတယ်။
စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းတဲ့ ဇလုံတောင်ရဲ့ အံ့ဖွယ်သမိုင်းကြောင်းတွေကို လေ့လာရင်း တောတောင်စိမ့်စမ်းသဘာဝအလှတရားများကို ခံစားနိုင်မှာဆိုတော့ ထူးခြားတဲ့ခရီးစဉ်လေးဖြစ်မှာသေချာပါတယ်။
စစ်ကိုင်းတိုင်းမှာရှိတဲ့ အထင်ကရဘုရားစေတီတွေထဲက နောက်တစ်ဆူကတော့ သမ္ဗုဒ္ဓေဘုရားပဲဖြစ်ပါတယ်။ သမ္ဗုဒ္ဓေဂူဘုရားမှာရှိတဲ့ ဆင်းတုတော်ဟာ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံရဲ့ Borobudur ဘုရားနဲ့ဆင်တူတယ်လို့ ပြောစမှတ်ပြုကြပါတယ်။ ဘုရားဆင်းတုအဆူပေါင်း (၅) သိန်းကျော်ကို ဖူးမြော်ရင်း ခမ်းနားထည်ဝါတဲ့ ရှေးခေတ်ဗိသုကာလက်ရာတွေကိုပါ လေ့လာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးကို လာရောက်လည်ပတ်မယ့် ခရီးသွားဧည့်သည်တိုင်းသွားရောက် ဖူးမြော်လေ့လာသင့်တဲ့နေရာတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဘိုးတော်ဘုရားတည်ထားကိုးကွယ်ခဲ့တဲ့ မင်းကွန်းပုထိုးတော်ကြီးဟာလည်း စစ်ကိုင်းတိုင်းရဲ့အမှတ်သင်္ကေတတစ်ခုပါပဲ။ ရည်ရွယ်ခဲ့တဲ့ဉာဏ်တော်အမြင့်ထက် (၃) ပုံ (၁) ပုံပဲတည်ဆောက်ပြီးစီးခဲ့ပေမယ့် အဝေးကတောင်မြင်ရတဲ့ မင်းကွန်းပုထိုးတော်ကြီးက အမှန်တကယ်ကို ခမ်းနားလှပါတယ်။ မင်းကွန်းပုထိုးတော်ကြီးမှာ ထားရှိဖို့အတွက် ဘိုးတော်ဘုရား လှူဒါန်းခဲ့တဲ့ ကြေးပိဿာချိန်စုစုပေါင်း (၅၅,၅၅၅) နဲ့မင်းကွန်းခေါင်းလောင်းကြီးကလည်း ရှေးမြန်မာပန်းပဲပညာရှင်တွေရဲ့လက်ရာကို လေ့လာနိုင်မယ့်နေရာတစ်ခုဖြစ်တာကြောင့် သွားလည်မယ့် Checklist ထဲမှာ ထည့်ထားလိုက်နော်!
၁၆၃၆ ခုနှစ်မှာ သာလွန်မင်းတရားကြီးတည်ထားကိုးကွယ်ခဲ့တဲ့ ထူးခြားတဲ့ဗိသုကာလက်ရာနဲ့ ကောင်းမှုတော်စေတီကလည်း စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးရဲ့ ကျက်သရေဆောင်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ များသောအားဖြင့် တွေ့မြင်နေကျဖြစ်တဲ့ ဘုရားပုထိုးစေတီတွေနဲ့ ကွဲထွက်နေတဲ့ ပုံသဏ္ဌာန်က ကောင်းမှုတော်စေတီကို ပိုပြီးထူးခြားစေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမှာက သွားလည်စရာနေရာတွေ၊ ဘုရားပုထိုးစေတီတွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့အတွက် တကယ်သွားလည်ဖို့စီစဉ်တဲ့အခါ ဘယ်ကို အရင်သွားရမှန်းမသိတာမျိုးမဖြစ်ရအောင် Oway Travel Call Center 01 2318939 ကိုအခုပဲဆက်သွယ်လိုက်နော်!
ထူးခြားတဲ့အတွေ့အကြုံသစ်တွေကိုရှာဖွေဖို့ ခရီးသွားမယ်ဆိုရင်တော့ ခရီးသွားမိတ်ဆွေတွေအတွက် Flight, Hotel, Express Buses, Visa, Tour, Car Rental စတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး အကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုပေးနေတဲ့
Oway Travel Customer Care Center 01 2318939 ကိုသာဆက်သွယ်လိုက်ပါ။
Oway Website >> https://oway.com.mm/ နဲ့
Oway Travel App >> oway.com.mm/mobile မှာဝင်ရောက်ပြီးတော့လည်း online booking ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
#OwayTravel #Flight #Hotel #ExpressBus #Visa #Tour #CarRental#OwayRide #MiniOway #HappyMemoriesTravelWithOway#MyanmarFirstTravelApp